Prasta Khabar-आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
२ कार्तिक, हेटौँडा । नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औं जन्मजयन्ती बिहीबार (आज) स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ ।
महाकवि देवकोटाको जन्म वि.सं. १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औंसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन डिल्लीबजारमा भएको थियो । १० वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खन्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् ।
नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको ‘मुनामदन’ खन्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा बढी बिकेको पुस्तक हो । नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी–प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृतिप्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ । उनमा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ ।
भारतका महापन्डित राहुल साँकृत्यायनले देवकोटा एक्लैलाई भारतका महाकवि सुमित्रानन्दन पन्त, जयशंकरप्रसाद र सूर्यकान्त निरालाको संयुक्तरूपसँग तुलना गरेका थिए भने नाट्यसम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा ‘मुनामदन’, ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य र ‘पागल’ कवितासँगै तीनपटक जन्मेको बताएका थिए । विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार–प्रसारमासमेत उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
वि.सं. २०१६ मा शिक्षा तथा स्वायत्त शासनमन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयकारूपमा लागू गर्नुरगराउनु र वर्तमान नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाका अविस्मरणीय देन हुन् । तीन महिनामा ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य, १० दिनमै ‘सुलोचना’ महाकाव्य र एकैदिनमा ‘कुञ्जिनी’ खन्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरुन्त कविता लेख्नसक्ने क्षमता थियो । देवकोटाको कवि–प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र संख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ ।
आज श्रीपञ्चमी, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरीदैँ
हेटौंडामा पोखरेली गजलकार दीपक समीप
२०१७ मा सर्वाधिक कमाउने विश्वका दस सिनेमा
८ माघ, हेटौँडा । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्रीपञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको...
८ माघ, हेटौँडा । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको गत ५ गते भएको साधारणसभा एवम् निर्वाचन...
राजदेवीको सप्ताहमा ३७ लाख संकलन
७ माघ, हेटौंडा । हेटौडा–१७ राजदेवीमा रहेको राजदेवी माविले विद्यालयको भौतिक एवम शैक्षिक उन्नतीको लागि संचालन...
ग्यालेक्सी होटलका सञ्चालक पक्राउ
७ माघ , हेटौँडा । मकवानपुर प्रहरीले हेटौँडा ४ मा रहेको ग्यालेक्सी होटलका सञ्चालक रमेशकुमार श्रेष्ठलाई...
७ माघ, हेटौँडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले ३ नम्बर प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा...
७ माघ, हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आज सपथग्रहण गरेका छन् । संसदको पहिलो बैठकमा सभामुख डोरमणी...
७ माघ, हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेश संसदको सभामुखको रुपमा प्रदेशसभा सदस्य डोरमणी पौडेलले सपथग्रहण गरेका छन् । आज ३...
७ माघ, हेटौँडा । पोखरेली गजलकार दीपक समीपले शनिबार हेटौंडामा आफ्ना गजल सुनाएका छन् । गजल मञ्च मकवानपुरको...
कटुवाललाई पूर्व अध्यक्षहरुको ‘आर्शिवाद’
७ पुस, हेटौँडा । मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको पुस १५ गतेदेखि हुन लागेको ५१ औं साधारणसभामा वर्तमान बरिष्ठ...